Yini ongayibona kuma-Champs Elysees eParis | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | General, EParis
Un Uhambo oluya eParis lufanele ukuma ngokuthula emakhoneni alo ngalinye, ngokuba ngelinye lamadolobha athakazelisa kakhulu futhi athandana kakhulu, indawo lapho izehlakalo zomlando zenzekile nokuthi namuhla ziyaqhubeka nokuba nentelezi eyingqayizivele. Uma uzovakashela leli dolobha lezothando, awukwazi ukuphuthelwa izindawo ezinjengeChamps Elysees, okuyindlela enkulu yalo.
Siya khuluma ngama-Champs Elysees nakho konke esingakubona eduze nale ndawo ebalulekile yedolobha laseParis. Yize kunamanye amakhona amaningi, uzobona le ndawo, ngoba ingenye yendawo emaphakathi kakhulu edolobheni, ngakho-ke ungaphuthelwa yikho konke okubonayo.
1 I-Elysium Champs avenue
2 IKhothamo Lokunqoba
3 IConcorde Square
4 IGrand Palais noPetit Palais
5 I-Alexander III Bridge
6 I-Orangerie Museum
I-Elysium Champs avenue
Le ndlela ibaluleke kakhulu eParis futhi umlando wayo waqala ngekhulu leshumi nesikhombisa. Kuyindlela enkulu enamamitha angaba ngamashumi ayisithupha ububanzi namakhilomitha amabili ubude ukusuka ku- Indawo de la Concorde ukubeka uCharles de Gaulle ikuphi i-Arc de Triomphe. Ngekhulu le-1994 ukwakheka kwamanje kwakhiwa futhi ngekhulu elilandelayo kwalungiswa ngemigwaqo eseceleni. Enye yezinto ezinkulu eyazilungisa yenziwa ngonyaka we-75. Njengelukuluku, kufanele kushiwo ukuthi kusukela ngama-XNUMX isigaba sokugcina seTour de France esidumile sitholakala ngqo kule ndlela. Akuyona nje kuphela indawo exhumanisa izingxenye ezibalulekile zeParis ngomgwaqo, kodwa futhi sekuyindawo ebaluleke kakhulu yokuzilibazisa, enezitolo zikanokusho ezivela emikhiqizweni efana neChanel noma iChristian Dior, izindawo zokubukela amabhayisikobho, amathilomu, izindawo zokudlela nezindawo zemidlalo yaseshashalazini.
Lesi ngesinye sezikhumbuzo ezimele kakhulu kuyo yonke iParis futhi sisekupheleni kweChamps Elysees. Ukusuka kule ndawo singathola olayini bezokuthutha abaya kuyo yonke iParis, ngakho-ke ngokuqinisekile kuzoba yindawo esizodlula kuyo. EMpumalanga I-arch inokuphakama kwamamitha angamashumi amahlanu futhi ukwakhiwa kwalo kwathatha iminyaka engamashumi amathathu, ekuqaleni kwekhulu le-XIX. Lapha, isibonelo, ukubanjwa kwamasosha ezimpi ezimbili zomhlaba kwabanjwa, okwenza kwaba yindawo enomlando. Ezansi kuneThongo Lesosha elingaziwa, itshe lesikhumbuzo elihlala livutha amalangabi. Kungenzeka ukufinyelela ngaphakathi kwayo futhi ujabulele ukubukwa okuvela endaweni engenhla.
Lokhu kungokwesibili isikwele esikhulu kunazo zonke eFrance ngemuva kwamaQuinconces eBordeaux. Lesi sikwele sisukela ngekhulu le-1792 futhi ekuqaleni sasibizwa ngePlaza Luis XV. Ngo-XNUMX kwabhidlizwa umfanekiso wenkosi wamahhashi owawusenkabeni yesikwele futhi wabizwa ngePlaza de la Revolución. Njengamanje singathola enkabeni yayo i-obelisk okungeyethempeli laseLuxor eGibhithe elineminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezintathu ubudala.
IGrand Palais noPetit Palais
El IGrand Palais yayiyisikhungo se-Universal Exhibition yango-1900 ngesitayela se-eclectic sokwakha sesikole saseParis. Yitende elikhulu elinesitayela esihle lapho kubanjwa khona zonke izinhlobo zemibukiso nemicimbi. Kusuka kubaluni bezobuciko kuya embukisweni wezimoto noma kwi-International Exhibition of air locomotion, amasaluni omculo noma naseBhuku Elifanele. IPetit Palais nayo yakhiwa ngasikhathi sinye futhi njengamanje igcina iMnyuziyamu Yezobuciko okwenza kube yinto okumele ibonwe.
I-Alexander III Bridge
Este ibhuloho elakhiwe ngesitayela seBeaux Arts sesikole saseParis Ingesinye sezithombe ezithwetshulwe kakhulu kulo lonke idolobha futhi siseduze nale ndlela. Ixhuma i-Esplanade ye-Invalid ne-Grand Palais. Namuhla kuwuphawu lokwakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX le-Belle Epoque. Yibhuloho esizofuna ukuthatha kulo izithombe ezimbalwa, ngoba lakha isithombe esaziwa kakhulu nenhle kuyo yonke iParis. Imihlobiso yaso yegolide namalambu omgwaqo amaningi kwenza kube umqondo omuhle ukuyivakashela nasebusuku.
Eduze kwendawo lapho sithola khona le Museum enhle engaziwa njengeLouvre kodwa ekufanele impela. Itholakala esakhiweni esihle ebesisebenza njengendawo yokugcina izithombo eziwolintshi, yingakho igama laso. Kulesi sigcinamagugu singathola i- inani elikhulu lemidwebo yama-impressionist ngabadwebi abanjengoMonet. Amakamelo abaluleke kunawo wonke yilawo akhombisa imisebenzi emikhulu yama-Monet's Water Lilies. Kwamanye amakamelo singabona imisebenzi kaPicasso, uMatisse noma uRenoir. Ithathwa njengomunye weminyuziyamu ehamba phambili edolobheni ngoba, yize incane, iyathandeka kunabanye abagcwele kakhulu futhi inemisebenzi ebalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » I-Champs Elysées, eParis